Ungafaka kanjani isandla ekunqandeni ukuguquka kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ungafaka kanjani isandla ekunqandeni ukuguquka kwesimo sezulu?
Nsuku zonke kukhulunywa ngemiphumela emibi edalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni jikelele. Kunabantu abaningi, ngabodwana, abafuna ukubamba iqhaza futhi banikele ngezinhlamvu zabo zesihlabathi ukulwa nokunciphisa.
Yize yonke imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, mhlawumbe ngenxa yendawo ohlala kuyo, ibonakala ikude nawe, sonke sinesibopho salesi simo. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi unganikela kanjani ngohlamvu lwakho lwesihlabathi ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu?
1 Yazi ukuthi siyingxenye yenkinga
2 Izenzo zokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
3 Sebenzisa imilayezo ethile
Yazi ukuthi siyingxenye yenkinga
Yize singazizwa siphikisana nabo maqondana nokuguquka kwesimo sezulu, ngenxa yokuthi umthelela wethu awunamphumela omningi, kufanele sikhumbule ukuthi asihlali sodwa emhlabeni nokuthi, njengathi, kukhona abanye abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7,5 ngaphezulu.
Ezingeni ngalinye sikhipha i-CO2 namanye amagesi abamba ukushisa emkhathini lapho sisebenzisa eyethu imoto noma izithuthi zomphakathi. Lapho sisebenzisa ugesi ekhaya, siyothenga, njll. Cishe yonke into esiyisebenzisayo ihambisana nokukhishwa ekukhiqizeni kwayo, ukupakisha, ukusabalalisa, njll. Ngalesi sizathu, izenzo zethu zansuku zonke zifaka isandla ekwandeni kokufudumala komhlaba, ngakho-ke, ekuthuthukiseni imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Njengoba kungenzeki ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu kumuntu ngamunye, singasiza ekuqedeni imikhuba ekukhuthazayo. Kunezenzo eziningi ezizuzisa imvelo futhi ezisiza ukugwema ukwanda kokuguquka kwesimo sezulu.
Izenzo zokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
Izenzo okufanele siziguqule zombili zizimele futhi zihlangene. Ukuzibandakanya komphakathi kubalulekile ekwakheni izinqubomgomo zomphakathi ezisisiza ukunciphisa imithelela yethu emvelweni. Izinqubomgomo kufanele kuhloswe ekuhlukaniseni amandla kanye nokuguqulwa kwamandla ikakhulukazi, ngoba zingumthombo wokungcola okunikela kakhulu ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Amandla avuselelekayo ayikusasa lamandla. Siyaphoqeleka ngandlela thile ukuthi sithuthukise futhi sisebenzise okuvuselelekayo njengomthombo wamandla oyinhloko, kungekudala noma kamuva. Kungenxa yokuthi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iyalimaza noma ngenxa yokwehla kwamandla kawoyela.
Ukuvumela izakhamizi ukuthi zibambe iqhaza kuzinqubomgomo zomphakathi kuzovumela ukukhiqiza izinqubomgomo ezinemininingwane eminingi, ezinolwazi, eziqondakala kangcono nezingenzeleli zawo wonke umuntu, ngaphezu kokwanda kokwethembana ezikhungweni. Kukhulunyiwe ukuthi ezingeni ngalinye kungenziwa okuningi, kepha ukubamba iqhaza komphakathi ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu kubaluleke kakhulu, njengoba umphakathi uyimbangela eyinhloko yezinguquko ekusetshenzisweni, amandla kanye nokuhamba kwezindlela ezinomthelela ekwandeni kwamanje kokukhishwa kwegesi engcolisa umoya. Uma umphakathi ulinganiselwe ekuceleni izinguquko zokuhamba okusimeme futhi okungcolisa kakhulu, kuzobe kuzuza ukuthi ukukhishwa okunomthelela ekuguqukeni kwesimo sezulu kuncishisiwe.
Ngalokhu, sekukhona amathuluzi asetshenzisiwe emadolobheni afana ne ama-Ajenda adumile 21, eyaqalwa eNgqungqutheleni Yomhlaba eyayiseRio de Janeiro ngo-1992, njengenye yezimiso zabo eziyisisekelo ukubamba iqhaza kwezakhamizi ngokusebenzisa Isithangami Sabahlali ukuze zichaze uhlelo lukamasipala lwezenzo zezemvelo.
Ukubamba iqhaza kahle ekwakhiweni kwezinqubomgomo zezemvelo ezisimeme kakhudlwana, kufanele ucabange umhlaba wonke futhi wenze ngendlela yangakini. Isibonelo, esinye sezenzo ongazenza ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu ukusebenzisa kabusha kabusha imfucuza eyenziwe ekhaya lakho. Lokhu kuzokwanda ukusetshenziswa kabusha kwezinto zokwakha kanye nokwehliswa kwezinto zokusetshenziswa ngokuncishiswa komphumela womoya ongcolile.
Sebenzisa imilayezo ethile
Ngesikhathi sokusakazwa kokuguquguquka kwesimo sezulu, kuye kwaqinisekiswa kusukela ngemilayezo yokwethusa ememezela ukuphela komhlaba azisebenzi kahle ekwandiseni ukubamba iqhaza kwezakhamizi. Ngakho-ke, kunembile kakhulu ukugcizelela izixazululo ezisebenzayo nezingaba khona zenkinga ethile yezemvelo bese uthola izinzuzo ezingatholakala kuyo.
Ukusiza umphakathi ukuthi ubambe iqhaza ngokumelene nokuguquka kwesimo sezulu ukwandisa izingxoxo osukwini lwethu nosuku ezibhekana nakho. Ngakho-ke singagxilisa ulwazi lwethu ngabo futhi sivuse intshisekelo nokukhathazeka ngokufuna ukwazi okwengeziwe futhi senze ngokufanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ungafaka kanjani isandla ekunqandeni ukuguquka kwesimo sezulu?